Akeneme ohlinzwe wangathungwa esibhedlela | News24
LAST UPDATED: 2019-11-21, 18:49
Akeneme ohlinzwe wangathungwa esibhedlela
UNINA wowesifazane wasendaweni yaseMpophomeni uthi akazi kuzo kwenzakalani ngekusasa lengane yakhe eyahlinzwa esibhedlela i-Northdale esikhathini esingange nyanga esedlule njengoba namanje ingakathungwa.
UNkk Zodwa Ndlovu uthi indodakazi yakhe uNks Nonjabulo Molefe (23) wangena kulesi sibhedlela mhla ka-9 kuNhlolanja (February) eyobeletha wafike wabeletha ngomthungo wabe esededelwa ukuba aye ekhaya mhla zili-11 kuNhlolanja (February).
Emva kwezinsuku ezimbalwa ebuyele ekhaya wezwa isigaxa esiqinile esiswini ngenhla komthungo unina wabe esemubuyisela esibhedlela.
Uthe: “Ngambuyisela esibhedlela mhla zili-27 kuNhlolanja ngoba ngangifuna bemuhlole ukuthi yini lena engaphakathi.
Babe sebeyamuhlinza bethi bafuna ukumkhipha sona lesi sigaxa kodwa kuze kube yimanje abakaze bemthunge. Kunalokho bamufaka ibhandishi bamuhlanze njalo emva kwezinsuku ezintathu. Okungixaka kakhulu ukuthi abakaze bangitshela ukuthi yini lena eyayingaphakathi esiswini nokungenza ngisole ukuthi kungenzeka ukuthi kunento abayishiya ngaphakathi esiswini sendodakazi yami ngephutha.
“Uma ngibuza ukuthi yini bengangitsheli ukuthi batholani esiswini sakhe, bangitshela ukuthi kwakuwubovu nje kuphela ayikho into etheni. Ubovu olunjani oluqina lube isigaxa?
“Angikaze ngizwe kuthiwa umuntu uhlala isikhathi eside kangaka engathungiwe,” kuchaza yena.
Uqhube wathi indodakazi yakhe ibisikhala ubusuku nemini ngesikhathi ihleli esibhedlela ithi ayisafuni ukuhlala khona waze wanquma ukuba ayikhiphe iyohlala ekhaya.
“Ngamkhipha esibhedlela ngoLwesine mhla zili-22 kuNdasa (March) kanti nabo esibhedlela bavele balibeka ngembaba ukuthi vele ngeke basamuthunga. Ngibone singasekho isidingo sokuthi aqhubeke ahlale khona esibhedlela ekubeni ngazi kahle ukuthi ayisekho into abasazomusiza ngayo.
“Ibuhlungu lento abayenze enganeni yami angazi nokuthi ngenzenjani. Kunalokho bayitshele ukuthi kumele ilokhu ibuya njalo uma sekuphele inyanga bayoyihlola ukuthi iqhuba kanjani. Ngizokwenzenjani uma kungukuthi lembobo ayisavaleki ?
Ngifuna izimpendulo zokuthi kwenzeka kanjani lokhu nokuthi ngabe kuvumelekile yini?.
“Angisakwazi nokulala ebusuku akusavumi noma ngidle ngoba angazi ukuthi kuzokwenzekalani ngendodakazi yami.
Sizo kwenzenjani uma sesithola ukuthi ngeke besakwazi ukumthunga kwazise sekudlule isikhathi eside kangaka?”
UNks Molefe utshele i-Echo ukuthi usephila ngamaphilisi ezinhlungu ngenxa yobuhlungu abhekana nabo zonke izinsuku. Uthe ufuna isibhedlela siyikhokhele lento esimenze yona.
“Kuze kube yimanje angikwazi ukugoba kahle ngenxa yezinhlungu. Ibuhlungu lento abangenze yona ngoba akukho ngisho noyedwa owangichazela ukuthi kwenzakalani,” kubeka yena.
Okhulumela uMnyango wezeMpilo uNkk Ncumisa Mafunda ukuqinisekisile ukuthi uNks Molefe wangeniswa esibhedlela wahlinzwa waqede wangathungwa.
“Lesi isinqumo esathathwa ngodokotela kanti siyindlela engcono yokuqinisekisa ukuthi inxeba alikutholi ukungcola uma kuqhathaniswa nokuphinde kuvalwe isikhumba ngomthungo. Ngesikhathi kuthathwa lesi sinqumo isiguli saziswa ngaso kanjalo nalowo osondelene naso. Sabe sesidedelwa esibhedlela sanikezwa nencwadi yasemtholampilo ukuze ayohlolwa ukuthi uphola kanjani,” kubeka yena.
UNks Molefe ukuphikisile lokhu okushiwo uMnyango wezeMpilo wathi umama wakhe uyena owaze wanquma ukumkhipha esibhedlela ngoba ebona ukuthi alukho uziso alutholayo kanti futhi akekho ofuna ukumsiza.